Estonia Online Casino Sites - Pamhepo Casino Bhonasi Makodhi
Loading ...Kunyangwe paine chokwadi chekuti mumakore achangopfuura kubhejera kweEstonia kwaifanirwa kupfuura nenguva dzakaoma - idambudziko repasirese remari nekusimbisa kwemitemo kubva kuhurumende, nedzimwe nguva dzakaipa - anoramba achingo shanda zvakanaka chete, asiwo kusimudzira .
Ehezve, zvese izvi zvinhu, sekutaura, zvakakonzera kune kumwe "kuchenesa" mumatanho evanobhejera vanoita. Varidzi vemakasino madiki vaifanirwa kuavhara nekuda kwekusabatsira, asi dzimba hombe dzekubhejera, zvinopesana, dzakawedzera mari dzavanowana. Yakapihwa kune izvi uye kuvhurwa kwepamhepo kasino.
Kubudirira kukuru kwevaEstonia kunofarira roulette, asi kwete kure nazvo kwaenda poker uye slot michina. Zvichida pano paizove kuita nyika lottery uye Eesti Loto. Mushure mezvose, maererano nehuwandu, inotambirwa kweanoda kusvika 80% yevagari vemuEstonia.
Kunyange zvazvo vaBaltic vachitaura ivo voga uye vachida kubhejera varaidzo, asi huwandu hwemari yemakasino muEstonia inowana kubva kune vatashanyi . Kunze kwemakwikwi pakati pavo Finns, nekuda kwenzvimbo yekuswedera kwenzvimbo dzenyika mbiri. Munguva pfupi yapfuura, zvakadaro, pane maitiro anoratidza kuti macasino emuno kazhinji vashanyi maRussia, huwandu hwayo huchave hwakaenzana neveFinnns.
Sekureva kweIstonia Ministry of Tourism yegore kusvika paavhareji inoshanyirwa nevanhu vangangoita zviuru mazana masere muFinland, panguva imwechete ivo vakapedza husiku mamirioni 800,000 pano. Panzvimbo yechipiri zvirokwazvo maRussia ari kumashure kweFinnns zvakapetwa kane. Izvo zvakanaka kutaura kuti aya manhamba haana kusanganisira avo vakagara neshamwari kana hama, vachiuya kuEstonia kwezuva rimwe chete kana kuuya pano pane cruise liners.
Panyaya yezera maRussia vadiki pane maFinnns nemaSweden. Mukupesana nevashanyi veScandinavia, Russian inopambadza. Ivo vanowanzo sarudza kwete chete anodhura emahotera, asiwo iwo arimo mune zviripo kasino. Uye mari yavanosiya kumashure zvakanyanya kupfuura vavakidzani vavo vekuchamhembe netariro yekuhwina mubairo mukuru.
Runyoro rweZvinyorwa zvepamusoro dze10 Estonian Online Casino Sites
Kubudirira kwekubhejera bhizimisi muEstonia
Makasino ekutanga akaonekwa munyika nguva pfupi yapera kuvapo Soviet Union neyaimbova mariphabliki akawana rusununguko. Kufamba kwekuvandudzwa kwebhizimusi rekubhejera muEstonia kunoshamisa. Kunyanya mushure mekunge nyika yave nhengo yeEU. Zvino zviremera zvakaunza zvakaomarara kugadziriswa kumitemo inodzora kubhejera bhizinesi, asi, oddly zvakakwana, vanoenda kwaari vanongobatsirwa.
Zvakaoma kutenda, asi makore mana apfuura, Estonia yaive neanenge mazana maviri akasiyana kubhejera (makasino, dzimba dzemuchina, nezvimwewo). Vaiva nehupfumi hwese hwevanhu 200, pakati pavo paive nemakwikwi akakomba. Inokwezva yekudyara mamiriro ekunze akazogadzira mamiriro apo vatambi vasazongo potsa pane ese makasino. Mumutemo mumwe chete uyu hauna kusanganisira matanho anodzivirira. Chero ani anoda kuvhura yekubhejera institution anogona kuzviita muEstonia pasina matambudziko. Kamwe zvigadziridzo zvakagamuchirwa pamusika ndivo chete vatambi vakuru uye vakwikwidzi vavo vadiki vakamanikidzwa kuenda.
Tinoda kucherechedza kuti nehungwaru sei zviremera zveEstonia zvakatumira kubatsirwa kwevagari vayo vese vanovimba zvakanyanya nevaraidzo yekubhejera. Iwo macasino ese arikubhadhara yakakwira yakakwira mutero, nepo huwandu hwemari huchiendeswa kunovandudza tsika (46%). Izvo zvakasara zvinogoverwa pakati peRed Cross uye nemari yezvirongwa zvinokutendera iwe kuti ubatsire kune avo vanoshaya, kusanganisira vana.
Aya maturusi akafanana akaronga akawanda tsika zvirongwa uye zviitiko: zviripo mabhuku, mhemberero, vakabvisa iyo firimu uye nezvimwe zvakawanda. Kunyangwe paine chokwadi chekuti muEstonia nenzvimbo idzi zvinopihwa mari kubva kubhajeti rehurumende, inowanzo shandiswa mari inogamuchirwa kubva pakubviswa kwemitero pakubhejera. Mune mamwe mazwi, vatambi vanosiya mari mukasino, uye vanobhadhara yakawanda yemagariro mapurojekiti nezviitiko, uye mari yekuwedzera kubva kuhomweyo zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuita.
Estoni mitemo yemari yekubhejera
Ndichiri kutamba muEstonia kasino inogona chero murume, pane zvimwe zvinodiwa zvekushanya kwayo. Nekudaro, kana iwe ukafunga kuenda kunogutsa pfungwa yemafaro, usakanganwa kuunza pasipoti yako kana chero gwaro rinobvumidza kukuziva iwe. Panguva yekushanya kwake kunzvimbo yekubhejera unofanirwa kunge uine 21 makore. Pamusuwo wechero kasino vashanyi vanopfuura nyore kunyoresa.
Zvinotoshamisa kuti, kana ganhuriro dzezera kunyangwe vana vanogona kujoina kubhejera uye kushandisa nguva nepfuti dzemuchina pane ngarava kana vafambi. Zvaringana kuvana uye kubheja kwakanyanya, inova gumi euros.
Iko kune zvimwe zvinodiwa uye kuiswa kwenzvimbo dzekubhejera. Vanogona kuwanikwa mune chimwe chivakwa, uye chikamu cheiyo hotera yakaoma, varaidzo kana nzvimbo yekutengesa. Chinodiwa ndechimwe chakabuda.
Kutanga mu2012, nzvimbo dzekubhejera dzakatenderwa kuwedzera huwandu hwemakina mudzimba dzekubhejera kuita zvidimbu makumi mana. Kune rimwe divi, zvinokwanisika kuwedzera huwandu hwevaraidzo pane imwe - kukuvadza kwakanyanya kune kasino kasino, iyo yakazopedzisira yave padhuze nepadhuze, isingakwanise kumira makwikwi. Mumakore achangopfuura, huwandu hwemakasino hwainge hwoda kuita hafu, asi izvi hazvina kukanganisa kune vashanyi.
Mune zvese izvi pane zvakare zvakawanda. Kuderedza huwandu hwenzvimbo dzekubhejera dzakakwevera mukudzikira kwenhamba inotambura nekubhejera. Chinyorwa chevanhu vakatumirwa kune varidzi vecasino mutero nedhipatimendi rezvetsika. Zvinonyanya kufadza ndezvekuti hapana akamumanikidza iwe kupinda mairi hazvingasanganise - ndezvokuzvidira uye zvinoenderana nekuda kwemutambi. Kushanda nerondedzero yemabhangi, kufamba kwemari kufamba pamaaccount evanyanyisa kubhejera uye kusavabvumidza kune vangango mukweretesa.
Kwatinofanira kutamba muEstonia
MuEstonia uchawana mhando dzakasiyana-siyana dze casino . Uye izvi zvinoshanda kwete chete kuguta guru. Makashanasi akashanyira zvikuru uye makuru pane ose aripo, kunze kweTallinn, Narva, Tartu, Pärnu naJõhvi.
Estonia - iyi inzvimbo huru inokodzera zvakakwana kune mafeni ezororo rakanyarara uye hunhu hwakanaka. Yekare Tallinn, inozivikanwa nespas Pärnu neSaaremaa - idzi nzvimbo, pamwe nevamwe vazhinji vanokwezva vashanyi kubva pasirese kusvika kune yakayerwa nekufamba kwenguva, zvivakwa zvekuvaka uye varaidzo. Zvinoita here muEstonia kuenda kucasino kana kutamba online kasino? Ngatione!
Mitemo yeEstonia nezve kubhejera - nhoroondo yezvakaitika kubva muna 1990 kusvika 2017;
Vashambadziri vepasi rose vasingabvumirwi nemutemo vanoongororwa uye vanovharwa;
Pane urongwa hwemakambani akabvumirwa uye akavharidzirwa (masangano kwavari ari munyaya ino);
Kurongedza zvakanyanya kune vashanyi muchengeti yepamusitori;
Kupindira kumusasa wepasi-ndeye 21 makore.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekubhejera munyika ino uye iyo huru casino «Reval Park» verenga nyaya yedu.
Mitemo yeEstonia nezve kubhejera - nhoroondo yezvakaitika
Estonia yakawana rusununguko kubva kuSoviet Union muna 1991, asi kubvira mukupera kwema80-yezana ramakore XX muzana munyika yakatanga kusimudzira indasitiri yemitambo. Zvakajeka zveichi chiitiko, uye nemitemo yemitemo, isu tinopa mune tafura fomu.
1989 Chikepe "Georg Ots" yakava imba yekutamba yekutanga, kwavakatambira mari. Iyo yekutanga kasino muhotera "Palace" yeTallinn.
1990-1994 Kuvhura makateeti akadai emakiniki seOlympic Casino, Kristiine Casino, Play-In Casino Boka. Nyika inopa marezinesi.
1995 Mutemo N 580 "Pakubhejera". Inoita saizvozvo nekuchinja kwakawanda uye kugadzirisa. Kodzero yekuronga muHurumende, iyo inogona kupa marezinesi kumakambani akazvimirira. Ive neshuwa yekuwana rezinesi rekubhejera zviitiko (semhando dzakasiyana dzezviitiko - zvemakore gumi) uye mvumo yekuronga mitambo yemukana (kodzero yekuvhura kubhejera nzvimbo mune imwe nzvimbo - yemakore mashanu).
1997 Kushambadzira kwekubhejera asi kushambadzira munzvimbo dzekubhejera. Kuvhurwa kweMubatanidzwa wevashandisi vemitambo yekubhejera Estonia.
2008 Kusimbiswa kwemutemo "Pakubhejera" - nguva dzose chitupa, vese vashanyi vanogadziriswa, mutambi anogona, pakukumbira kwake kurambidza kasino regai iye (kubva kuGamblers kudzivirira). Kuzvidzora wega pakubhejera maEstonia anogona kuseta iyo Mutero uye Tsika Bhodhi.
2009 Kubvumidzwa kwepamutemo kwepasino kasino - marezinesi evanoshanda zviri pamutemo uye kuvharira zvisiri pamutemo. Pamhepo kasino inofanirwa kuwanikwa kune vakuru chete, pamwe nekuziva kuzivikanwa uye nzvimbo yekugara yemutambi. Vashandi vekunze kuti vanyore zviri pamutemo zviitiko zvavo vanogona kupinda muchibvumirano nevashandisi vemuno, izvo zvinoshanda nenzira yepamutemo munharaunda yeEstonia. Dzimwe dzese nzvimbo dzisiri pamutemo dzekune dzimwe nyika dzakavharwa nevashandisi venetiweki, parizvino runyorwa rwevakarambidzwa kune vekunze vekuEstonia vanopfuura zviuru zana.
Pamhepo kasino - izvo zvekuti iyi mitemo inoreva kune mutambi?
MuEstonia, zvine chekuita nekubhejera zvinoshandiswa zvinonzi zvinodzorwa zvichiongororwa system - ndokuti, kubhejera hakubvumidzwe, asi pasi pe100% inodzorwa nehurumende. Izvi zvinoshanda kune isingaenzaniswi senyika-yakavakirwa macasino uye epamhepo makasino paInternet.
Kambani yepaIndaneti muEstonia inofanira kubvumirwa mune iyi nyika, uye itai kuitamba yakagadziriswa zvachose.
Kunze kasino isina rezinesi muEstonia, makwara uye mabhuroko. Kana kasino ikasabatanidzwa mu "dema rondedzero", ipapo inogona kuenda ikoko chero nguva uye zvobva zvaburitswa zvinogona kuve zvinonetsa.
Iye mutambi anofanira kunge aine zera repamutemo. Dhata rayo rinochengetwa mune yakasarudzika dhatabhesi yevatambi.
Inoteedzerwa account uye kuhwina - mari inogona kuendeswa chete kuaccount iyo kubva kupi dhipoziti (izvi zvinoitwa zvichipesana nenyaya yekuti saka "laundered mari") yakaitwa.
Nzvimbo dzisina kukwana dzenyika
Kasinasi inobvumirwa inowanikwa pakushanyira munhu mukuru (yakamanikidzwa kadhi rouzivi).
Nokuti zvichienderana nemutambo kune mukana wekurambwa pamusana pekutaura kwemunhu pachake kuThorosi neTaresi Bhodi, ipapo casino haina kodzero yekurega mutambi wacho.
Pamakasitos epamutemo pane zvakajeka uye zvakasimba zvinodikanwa, saka basa ravakaita pane imwe yenyika yeEurope, iyo yakawanda zvikuru kune vatambi.
Tmazano ake angada dopolnitenyh mamiriro ezvinhu
Tallinn, Estonia: guta remasvingo nemakasinos
Kolyvan, Rewal, Revel - anonzi Tallinn kare. Guta kweanosvika makore mazana mapfumbamwe. Zita reguta rinogona kureva "Danish castle", "chando guta" Kana zviri nyore "Kukiya".
Tallinn - chiteshi cheEuropean chakakurumbira uye nharaunda yetsika yepasirese - kunyanya nekuda kwe guta rekare . Muchikamu chino cheguta chakachengetedza zvivakwa zvakawanda XI - XV mazana emakore, kusanganisira huwandu hwakawanda hweshongwe.
Nhoroondo yenyika iyi inosangana zvakanyanya nenhoroondo yeRussia. Kwete kamwe Estonia yaive chikamu cheUSSR, asi ichigara ichiedza kuzvitonga. Muna 1991, nyika yakawana kuzvitonga.
Tallinn - nemiyero yemaguta makuru, guta iri diki kwazvo, zvinongova 430,000 vagari. Nekudaro, iri nezve 40 "kasino". Casinos muEstonia chero kubhejera kumisikidza - diki kirabhu ine slot michina, kamuri diki muhotera ine mashoma emitambo matafura uye, chokwadika, yepamusoro-giredhi hombe dzimba dzokubhejera
Muguta guru reEstonia, inogara iri yakawanda yevashanyi - izvi kazhinji maFinnns nemaSweden ari kuuya achibva kuFinland neSweden. Ndokusaka vashandi vekasino vajaira vaenzi uye vachikwanisa kuvashandira.
Iyo huru kasino yeguta - the Reval Park ipapo . Iyi ndiyo yakasarudzika (mune yakanakisa pfungwa yeshoko) iyo institution ine hotera yakanaka uye horo huru dzemitambo.
In the Reval Park ipapo anenge zana emitambo, pane roulette, baccarat, blackjack uye poker kamuri. Nenzira, muEstonia makaitiswa makwikwi mazhinji epasi rese, kuti vashanyi uye vagari veguta vajairane nerudzi urwu rwezviitiko.
Iyo casino yakakura ine yeguta racho yeOlympic Varaidzo Gulu ndere , iyo zvakare ine zvivakwa mune dzimwe nyika dzeBaltic uye muPoland, Slovakia uye Belarus.
Kupinda kucasino kunotenderwa kune vanhu vanopfuura makore makumi maviri nerimwe, kodhi yekupfeka haina - kunze kweku "sportivkah" haibvumidzwe.
Estonia pamepu yeEurope
1. Old Town: iyo nzvimbo kwaunofanira kuenda kutanga. Midzi yenhoroondo yeichi chikamu cheguta inoenda muzana ramakore rechi13. Kana iwe ukazviwana iwe uri mune imwe nyika: iro risingaperi dombo riri pasi petsoka, inodziya migwagwa yakamanikana, zvivakwa zvechokwadi, zvakachengetedzwa mukunaka kwayo kwepakutanga.
At iro Town Hall Square kune akawanda maresitorendi, maresitorendi uye ese marudzi ezvitoro zvinonakidza, maboutique. Yakanakisa pfungwa yekufamba pamusoro peGuta Rakare, Vyshgorod , iyo inopa maonero akasiyana eguta negungwa.
2. Kick-in-de-Kök: imwe yeshongwe dzakakurumbira dzeguta rekare, iro rakakomberedzwa - ruregerero tautology - rakakora madziro. Zita rayo rinoshandurwa se ” Tarisa mukicheni ” - nekuti zvainyatso kuve pachena izvo zvinogadzirira vanhu mudzimba dzepedyo.
Kiek mu de Kok anoda kusvika makumi mana emamita pakukwirira, pakukora kwemadziro - 40 metres.
Kana iwe ukaneta nekuyemura iyi giant kubva mukati nekunze, unogona kuenda parwendo runoshamisa kuburikidza nemakona ekumhanya achichera pedyo neguta reguta.
3. Kadriorg: iyo inozivikanwa nhaka yeRussia Humambo - muzinda waPeter I. Kuvaka kwakatanga muna 1718, ikozvino miziyamu iri muchivako.
Kadriorgtakzhe akadana Ekaterinentalem - "Mupata waCatherine." Muzinda uyu wakakomberedzwa nepaki yakanaka ine zvitubu, shiri nemaruva.
Hausi kure neimba yamambo ndiyo Museum of Modern Art Kumu, imwe yemamisimusi makuru muNorthern neEastern Europe.
Chokwadi pamusoro peEstonia
Population : mamiriyoni 1,293
Mimwe mitauro : Estonian, Russian, Chirungu
mari : EUR.
Nokuda kupinda muEstonia vagari veRussia vanoda visa .
0.1 Runyoro rweZvinyorwa zvepamusoro dze10 Estonian Online Casino Sites
2.0.1 Kubudirira kwekubhejera bhizimisi muEstonia
2.0.2 Estoni mitemo yemari yekubhejera
2.0.3 Kwatinofanira kutamba muEstonia
3 Kubhejera muEstonia
3.0.1 Mitemo yeEstonia nezve kubhejera - nhoroondo yezvakaitika
3.1 Pamhepo kasino - izvo zvekuti iyi mitemo inoreva kune mutambi?
3.1.0.0.1 paIndaneti kasino
3.1.0.0.2 Nzvimbo dzisina kukwana dzenyika
3.1.1 Tallinn, Estonia: guta remasvingo nemakasinos
3.1.3 Estonia pamepu yeEurope
3.1.4 Tallinn zvinonakidza
3.1.5 Chokwadi pamusoro peEstonia
bovegas hapana dhipoziti bhonasi kodhi 2020